Wararka Maanta: Arbaco, July 28, 2021-UK iyo Kenya oo kala saxiixday Heshiis cusub oo ka dhan ah khatarta Al-Shabaab
“Waxay ahayd wax wanaagsan inaan maanta la kulmo Dr Monica Juma. Waxaan qabanay dooddo aad u miro dhal ah. Waxaan isla meel dhignay talaabooyin kala duwan oo aan ku ilaalinayno nabadda labada dalba. Kenya waxay muddo dheer ahayd saaxiibkayaga difaaca Bariga Afrika. Waxaan sii wadaynaa inaan is-garab-taagnaano sidii aan wax uga qaban lahayn hanjabaadaha berri," ayuu yiri, xoghayaha difaaca UK Ben Wallace.”